Madaxweyne Sheekh Shariif Oo Kulan Kula Qaatay Dagmada Balcad Waxgarada Dagmadaasi | Radio Muqdisho	Tuesday, May 21st, 2013	Bogga Hore
Madaxweyne Sheekh Shariif Oo Kulan Kula Qaatay Dagmada Balcad Waxgarada Dagmadaasi
Published on August 1, 2012 by Canab · No Comments · 3,557 views
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaan maanta booqday dagmada Balcad ee gobolka Shabeelada Dhexe halkaas oo uu kulan kula qaatay Odayaasha dhaqanka iyo waxgarada ku sugan dagmadaasi.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa waxaa booqashadiisa ku wehliya Wasiiro ka tirsan xukuumadda saraakiil ciidan, Agaasimaha Hay’adda Nabadsugida Qaranka Soomaaliyeed iyo Mas’uuliyiin kale.
Kulanka uu maanta la qaatay Madaxweynaha ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradii ka qeyb galay kulan iyagoo uga mahadceliyay Booqashada uu maanta ku tagay Dagmada Balcad madaxweyne Shariif iyagoona u balan qaaday in ay dowladda la shaqeynayaan.
Waxgarada ayaa sheegay in amaanka dagmada uu yahay mid wanaagsan uuna xiriir fiican kala dhaxeeyo ciidanka dowaldda waxa ayna sheegeen in ay dhalinyaro badan oo ka tirsanaa shabaab ay ku biiriyeen ciidanka dowladda.
Madaxweynaha oo hadal ka jeediyay kulan uu la qaatay Waxgarada ku dhaqanka dagmada Balcad ayaa waxa uu sheegay in wax lagu farxo ay tahay in cadowgii laga xoreeyay Balcad ay shacabka hal meel uga soo wada jeesteen isagoona Madaxweynaha intaa ku daray in uu aad uga faraxsanyahay amaanka ka jira wadada isku xirta Balcad iyo Muqdisho.
Mudane Shariif Sheekh Axmed ayaa uga baaqay dadka ku nool dagmada Balcad in ay ka shaqeeyaan amaanka si loo hormariyo adeegyadda Bulshada ay u baahanyihiin.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa carabaabay in dhowaan la howlgalin doono warshada Dharka ee dagmada Balcad isagoona uga mahadceliyay muwaadiniintii isku howshay in ay ilaaliyaan hantida Qaranka.
Mar uu ka hadlayay Madaxweynaha ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM dadaalka ay u galeen soo celinta nabadda iyo kala dambeynta in la abaal marin doono dadaalka ay u galeen nabad ku soo dabaalida dalka ay colaada ka jirtay mudada ka badan 20ka sano.
Madaxweynaha ayaa ugu hambalyeeyay shacabka Soomaaliyeed in maanta si KMG ah loo ansaxiyay dastuurka dalka waxa uuna tibaaxay in maanta wixii ka dambeeyo laga baxay maraxadii kumeel gaarnimada aheyd loona gudbay dowladda rasmi ah.
Dhanka kale Madaxweyne Shariif ayaa ka tacsiyeeyay dilkii xalay fiidkii loo geystay Majaajiliistihii caanka ahaa ee Cabdi Jaylaani Malaaq “Marshaale” isagoona uga tacsiyeeyay ummadda Soomaaliyeed iyo eheladiisa waxa uuna ALLE uga baryay in uu Janadii Fardowsa ka waraabiyo.